စိတ်ထင်တိုင်းရေးမလို့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးပါ ...
Posted by May Thu Khine at 10:48 PM
Literature Talk (1)
အတွေ့ အကြုံ (1)
Lion - Camera Model – NIKON D90 F-stop – f/20 Exposure – 1/125 sec ISO – 320 Focal Length – 11mm (11-16 Tokina)
အခါအခွင့်သင့်ရင် - အခုလို သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ရင် မေမေပြောနေကျစကားတစ်ခွန်း ရှိတယ်။ "ငါ့သားကြီးကို သတိရလိုက်တာ၊ သင်္ကြန်မင်းသားကြီးကို သတိရလိုက်တာ" ဆိုပြီးတော့ ဘာရယ...
၀င်ရိုးပေါ်မှာ လည်တဲ့ လူလည် - အလွဲတစ်ချီတစ်မောင်းနဲ့ ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကိုယ်..နွား လိုကျောင်းခဲ့ရသူ..။ မြို့ကြီးသူ မြို့ကြီးသားများ ပေါင်းကြံရင် အရာရာ ပြောင်းပြန်လှန်အောင် အ တဲ့ ရွာသူ..။ ...
Jumble - - Rounded mass - untidy collection - mix up in untidy or confused way Usage: Please be taking care of those papers. Don't jumble up.
Oversea Burmese Youth Group
၆ ကြိမ်မြောက် အလှူ - ၂၀၁၁ မတ်လအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာလေငလျင်အတွက် ဘလောဂ့်ဂါ မနိုင်းနိုင်းစနေ ဘလောဂ့်မှ ဒီပို့စ်လေးဖြင့် အလှူခံခဲ့ပါတယ်။ ...